Nyochaa akụkọ ihe mere eme nke ọkpọkọ ọkpọkọ - Viga foset Manufacturer
Home blog Nyochaa akụkọ ihe mere eme nke ọkpọ mmiri
Datebọchị ： 2020-10-27 Categories ：blog Nlele ： 83
Ihe ọkpọ ọkpọ pụtara na Europe na narị afọ nke 16. Iji zere imefusị mmiri ma dozie ụkọ mmiri na-arịwanye elu na-arịwanye elu, e mepụtara pọmpụ. A wuru okpu mmiri nke mbụ na ọla kọpa, emesia ọ gbanwere ọla kọpa dị ọnụ ala.
Ihe ọkpọ ọkpọ pụtara na Europe na narị afọ nke 16. Iji zere imefusị mmiri ma dozie ụkọ mmiri na-arịwanye elu na-arịwanye elu, e mepụtara pọmpụ. A wuru okpu mmiri nke mbụ na ọla kọpa, emesia ọ gbanwere ọla kọpa dị ọnụ ala. Ihe nkedo ígwè na-ebu iwe na-abụkarị ọnụma n'ihi ọrụ aka ha dị mfe na ọnụ ala ha. Karịsịa, a na-ahụkarị ihe mgbago na-ebuli elu n'oge ochie ebe niile, mana ụdị ọkpọ a ọ bụghị naanị na ọ ga-agbagharị ọtụtụ ugboro n'oge iji wepụta ụfọdụ mmiri mmiri, Ọ dị mfe ime ọtụtụ ihe mkpofu na-enweghị isi, na n'ihi na isi gasị na-agba agba dị mfe "slack", ọkpọkọ na-adịkarị nhịahụ mgbe ogologo oge ejiri ya, ọ ga-emekwa ka ụfọdụ mmiri mkpofu. Na mgbakwunye, ọkpọ ihe nkedo dị mfe nchara, ọ dịkwa mfe ime ka mmiri dị mma. Ebibiwo ya n'oge mbufe ya, amachibidoro ya ire site na steeti.
Abanye na narị afọ nke 21, ahịa ndị ahịa agbanweela nnukwu mgbanwe. Ọtụtụ ihe amụọla ụdị ndụ okirikiri ụwa niile. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa amalitela ịchụ ụdị ndụ na ịkpọsa onye ọ bụla, na-enwe olileanya ịmepụta ebe obibi ha zuru oke. N'oge gara aga, mgbe ọtụtụ ezinụlọ zụtara pọmpụ mmiri, echiche nke nanị iche na 'jiri ya mee ihe' malitere ịgbaji. Ngwaahịa nwere ụdị ejiji, arụ ọrụ ọhụụ, na mmadụ iche na ụtọ ya na-ewu ewu. Karịsịa site na mmelite nke ndụ, ndị mmadụ na-etinyekwu uche na ahụike, nchekwa gburugburu ebe obibi na nsogbu ndị ọzọ.
Ebe ọ bụ na ọla kọpa dị mfe ịhazi na ịkpụ, ọtụtụ ihe mmiri dị n'ahịa bụ ọla kọpa. Ma ọla kọpa nwere ndu, na nickel na chromium electroplated n'elu elu nke ọla kọpa ga-ada mgbe oge ụfọdụ gasịrị, patina ga-eto. Lead na patina ga-emetọ mmiri pọmpụ ma merụọ ahụ ike ndị mmadụ. Tụkwasị na nke ahụ, akwa chromium electroplated electroplated nke dị n'elu ọkpọkọ ọla kọpa bụ ngwakọta nke kemịkal. Dabere na ogo na ọkpụrụkpụ nke electroplating, ọ ga-oxidized na peelled apụ. Onye ọsọ ọsọ ga-efunahụ ya na gloss na olulu na afọ 3-5, na ihe nkpuchi ikpeazụ nke ikpochapu na ikpughe nchara ọla kọpa ga-emetụta ọdịdị ahụ ma chọọ ka edochie ya. N'ime usoro imepụta ugboro ugboro, ọla kọpa na imepụta ọkụkụ ga-emepụta mmiri na-egbu egbu nke ukwuu na gas na-ekpofu ahịhịa, nke ga-ebute nnukwu mmetọ na gburugburu ebe obibi.
Site na mmepe nke sayensị na teknụzụ na teknụzụ na-arụpụta ihe, ọ ga-ekwe omume ịme ọkpọ site na iji igwe anaghị agba nchara. Igwe anaghị agba nchara bụ ihe mba ụwa ghọtara ahụike ahụike enwere ike ịkụnye n'ime ahụ mmadụ. Ọ na-enweghị ndu, na-eguzogide acid, na-eguzogide alkali, na-eguzogide corrosion, na anaghị ahapụ ihe ndị na-emerụ ahụ. Yabụ, iji igwe anaghị agba nchara agaghị emerụ isi mmiri mmiri pọmpụ ma nwee ike hụ na ahụike na ahụike mmadụ. Ọzọkwa, elu nke igwe anaghị agba nchara anaghị achọ ka a kpogharịa ya, usoro nrụpụta agaghị ebute mmetọ na gburugburu ebe obibi, ọ gaghị adị mkpa ka edochie ya n'ihi ịkpụchapu akwa electroplating, nke na-adịgide adịgide ma na-ezere mkpofu nke akụrụngwa. Igwe anaghị agba nchara igwe anaghị agba n ’ọ bụ naanị ozi ọma banyere ahụike maka ndị na - azụ ahịa n’ ụwa niile, mana uru nchedo gburugburu ebe obibi pụtara ìhè na-ekwuputakwa ọbịbịa nke ọwara mmiri nke igwe anaghị agba n’okpuru obere akụ na ụba carbon.
Mbụ: [Akwụkwọ akụkọ nke oge a] TOTO na-agbakwunye $ 100 Nde iji wuo Ebe Mmepụta nke Atọ Na Vietnam
Next: Iguzosi ike n'ezi ihe na-eweta enyemaka nye ụlọ ọrụ ọkpọkọ